isitjalo sokukhiqiza izinhlanzi senza izinhlanzi ezintantayo zokudla ezinqobayo
1.Fish feed production plant can produce various kinds of pellets for different varieties of fishes including Halibut pellets, Catfish pellets, I-CatCarp pellet, Ama-trout pellets, Ama-pellets we-Hemp, Ama-pellets we-CSL,njll.
2.Lo msele wokukhiqizwa kwezinhlanzi usanda kuthuthukiswa ukuze uhlangabezane nesidingo sokukhiqizwa okujulile kwama-pellets ezinhlanzi zezilwane.
Lo msele wokukhiqizwa kwezinhlanzi usanda kuthuthukiswa ukuze uhlangabezane nesidingo sokukhiqizwa okujulile kwama-pellets ezinhlanzi zezilwane. Ngokucaciswa okuningi lo msele wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo ungakhiqiza okuphakelayo kwezinhlanzi, ukucwilisa izinhlanzi zokudla, pet feed, ukudla kwemfuyo, njll. Imikhiqizo ingaba nobunjwa obuhlukile, ukunambitheka okuhlukile, izakhi ezicebile nokuthungwa okuhle ukuze kuhlangane nomkhuba ohlukile wokudla wezilwane. Ukulawulwa okuzenzakalelayo okuphezulu nokukhiqiza okuphezulu kokusebenza, our fish feed production plant is the best choice for medium and big sized feed mills and breeding farms. Our fish feed production plant can produce various kinds of pellets for different varieties of fishes including Halibut pellets, Catfish pellets, I-CatCarp pellet, Ama-trout pellets, Ama-pellets we-Hemp, Ama-pellets we-CSL,njll.
Our fish feed pellet production plant is the complete procedure of feed pellet production with capacity of 300-400kg/h. Lo msele wokukhiqizwa kwezinhlanzi wenzelwa ukwakheka ama-pellets kwezohwebo kusuka kummbila, ummbila, utshani, okusanhlamvu, amaprotheni, molasses njalonjalo, nama-pellets okugcina anezimo ezahlukahlukene, ukunambitheka okuhlukile, izakhi ezicebile nokuthungwa okuhle,and this floating fish feed production plant are widely used as aquatic and pet feed like goldfish, izinhlanzi ezishisayo, inhlanzi eyikati, ama-shrimps, inja, ikati nokunye.. Ukulawulwa okuzenzakalelayo okukhulu, ukusebenza kahle kokukhiqiza, umugqa wethu wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo uyisinqumo esihle kakhulu samamayela aphakathi nendawo amakhulu wokuphaka namapulazi okuzala. Imigqa yokukhiqiza ephelele ye-pellet enamakhono ahlukene ayatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezithile zamakhasimende.
Izici ze-Fish feed Pellet Production Line
1. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, umthamo ophakeme nokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
2. Isakhiwo esingamamodeli silungele ukuhlangana nokuhlangana, lula ukuthunyelwa nokufakwa.
3. I-PLC ilawulwa, i-alamu iyatholakala. Ukusebenza kulula futhi kulula.
4. Izinhlobo zokugcina zama-pellet nosayizi kungahluka ngokushintsha isikhunta. Izinhlanzi kanye ne-shrimp feed pellet, isikhathi sokuntanta emanzini singalungiswa ngokulungiswa kwe-extrusion degree.
5. Ukucutshungulwa kucutshungulwa inqubo ephezulu yokushisa ngaso leso sikhathi, kunciphisa kakhulu ukubola kwezakhi zomzimba ekudleni, ngasikhathi sinye sithuthukise amaprotheni (ngokuwohloka kwamaprotheni) nesitashi (ngokusebenzisa unamathisele isitashi) digestibility, ukuthuthukisa ukutholakala komkhiqizo.
6. Ukuze uqinisekise ikhwalithi namandla, kukhona ithuluzi elikhethekile lokunyusa ingcindezi. Ngaphandle kwalokho, insimbi yokufudumeza kagesi ithuthukisa isilinganiso sokukhulisa okuphakelayo.
● Izinto eziwugwadule Amaphilisi okusuthisa afaka amaprotheni ezilwane namaprotheni ezitshalo. Amaprotheni ezitshalo aqhamuka emmbolweni, irayisi, ukolweni, ubhontshisi, uphizi wekhekhe, njll; Amaprotheni ezilwane avela ekudleni kwezinhlanzi, isidlo se-shrimp, isidlo se-crab, ukudla kwe-sleeve-fish nokunye ungangeza enye isithako ngokuya ngezidingo nemikhuba yokudla yezilwane.
● Izinqubo Ezihilelekile ikakhulu Ukugaya okwenziwe ngezinto ezibonakalayo, ukuxuba ngezinto ezibonakalayo, pellets extruding, pellets omisa, nokupakisha i-pellet. The whole Inqubo Yokukhiqizwa Kwenhlanzi Yezinhlanzi can be highly automatically controlled.
● Umthamo wokukhiqiza 0.06 ukuze 5 ton ngehora iyatholakala.